Nguanhwɛfo Baason, Abirɛmpɔn Baawɔtwe​—Dɛn na Ɛkyerɛ Nnɛ? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Nguanhwɛfo Baason, Abirɛmpɔn Baawɔtwe—Dɛn na Ɛkyerɛ Nnɛ
“Yɛbɛma nguanhwɛfo baason, adesamma mu abirɛmpɔn baawɔtwe, ne no adi asi.”—MIKA 5:5.
Dɛn na Hesekia, Yesaia, Mika, ne Yerusalem mpanyimfo yɛe a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ nguanhwɛfo pa?
Henanom na ɛnnɛ wogyina hɔ ma nguanhwɛfo baason ne abirɛmpɔn baawɔtwe no? Dɛn na wɔyɛ boa Onyankopɔn nkurɔfo?
Dɛn na ehia paa sɛ woyɛ de siesie wo ho na sɛ daakye atamfo tow hyɛ Onyankopɔn nkurɔfo so a, woatumi atintim?
1. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ nea na Siria hene ne Israel hene reyɛ no renkosi aga?
AKA bɛyɛ mfe 750 ma Kristo aba no, Israel hene ne Siria hene kaa wɔn ntama bɔɔ ano de ntɔkwaw kɔforoo Yuda ahemman no. Ná wɔpɛ sɛ wɔtow hyɛ Yerusalem so tu Ɔhene Ahas ade so na wɔde onipa foforo tena ahengua no so. Ebia na wɔpɛ sɛ wɔde obi a omfi Ɔhene Dawid abusua mu tena agua no so. (Yes. 7:5, 6) Nanso anka ɛsɛ sɛ Israel hene hu sɛ ne nsa besi fam. Adɛn ntia? Ná Yehowa aka sɛ Dawid asefo nkutoo na wɔbɛtena n’ahengua so. Nea Onyankopɔn aka nso deɛ, ɔkwan biara so ɛbɛbam.—Yos. 23:14; 2 Sam. 7:16.
2-4. (a) Aka bɛyɛ mfe 750 ma Yesu aba no, ɔkwan bɛn so na Yesaia 7:14, 16 baa mu? (b) Nkɔmhyɛ no baa mu sɛn wɔ Yesu bere so?
2 Ahyɛase no, wohwɛ sɛnea na nneɛma rekeka kɔ a, wobɛka sɛ Siria ne Israel bedi nkonim ke. Ntɔkwaw bi koraa a wɔde bɔɔ ani deɛ, Ɔhene Ahas asraafo 120,000 na wɔtotɔe! Ahas ba Maaseia mpo faa mu wui. (2 Be. 28:6, 7) Nea ɛrekɔ so nyinaa na Yehowa ani tua. Ná Yehowa werɛ mfii ɛbɔ a wahyɛ Dawid no, enti ɔde n’asɛm hyɛɛ odiyifo Yesaia ano ma ɔkɔhyɛɛ ɔman no nkuran.
3 Yesaia kae sɛ: “Hwɛ, ababaa no benyinsɛn awo ɔbabarima na wato no din Imanuel. Ansa na abofra no behu sɛnea wɔpo bɔne paw papa no, na wɔagyaw ahene baanu a musuro wɔn yi asase ato hɔ ma ada mpan.” (Yes. 7:14, 16) Nkɔmhyɛ yi fã a edi kan fa Mesia no awo ho. (Mat. 1:23) Nanso “ahene baanu” no, Siria hene ne Israel hene, antow anhyɛ Yuda so wɔ Yesu bere so. Enti ɛbɛyɛ sɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Imanuel ho no nyaa mmamu a edi kan wɔ Yesaia bere so.
4 Bere a Yesaia kaa saa asɛm no, ankyɛ na ne yere nyinsɛn woo abarimaa, na wɔtoo ne din Maha-salal-has-bas. Ɛbɛyɛ sɛ abofra yi ne “Imanuel” a Yesaia kaa ne ho asɛm no. * Ɛnde, adɛn nti na wɔamfa saa din no amfrɛ no? Nea ɛte ne sɛ Bible mmere mu no, wɔwo abofra bi a, ɛtɔ da a wɔma no din de kae biribi titiriw bi. Nanso ebia n’awofo ne n’abusuafo bɛma no din foforo. Enti ɛbɛyɛ sɛ Yesaia ba no ne “Imanuel,” nanso wɔamfa saa din no amfrɛ no. (2 Sam. 12:24, 25) Adanse biara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ obi frɛɛ Yesu Imanuel da.—Monkenkan Yesaia 7:14; 8:3, 4.
5. Dɛn na Ɔhene Ahas yɛe a na ɛmfa kwan mu?
5 Bere a Israel ne Siria de wɔn ani sii Yuda so no, na Asiria nso ama ne homene so pɛ sɛ ɔko fa aman a ɛwɔ mpɔtam hɔ. Asɛm a ɛwɔ Yesaia 8:3, 4 ma yehu sɛ na Asiria bɛsoa “Damasko ahode” ne “Samaria asade” akɔ. Ɛno akyi no na wɔbɛtow ahyɛ Yuda ahemman no so. Anka ɛsɛ sɛ Yuda hene Ahas de ne werɛ hyɛ asɛm a Onyankopɔn nam Yesaia so kae no mu, nanso wanyɛ saa. Mmom Ahas ne Asiriafo kɔyɛɛ apam, na ewiee ase no Asiriafo hyɛɛ Yuda so. (2 Ahe. 16:7-10) Sɛ yɛbɛka a, na Ahas ne oguanhwɛfo a odi ne man anim, nanso wantumi ammɔ wɔn ho ban. Yebetumi abisa yɛn ho sɛ, ‘Sɛ mewɔ asɛnhia bi na mepɛ sɛ misi ho gyinae a, mede me ho to Onyankopɔn so anaa nnipa so?’—Mmeb. 3:5, 6.
6. Sɛ wode Hesekia amammuo toto Ahas de ho a, wuhu no sɛn?
6 Aka bɛyɛ mfe 746 ma Kristo aba no na Ahas wui, na ne ba Hesekia bedii n’ade. Saa bere no, na Yuda ahemman no sikasɛm atete apansam, na na wɔde Yehowa som nso ato nkyɛn koraa. Enti seesei a aberantewa yi aforo ahengua yi, dɛn na obedi kan ayɛ? Ɔman no sikasɛm na ɔbɛma ɛho ahia no anaa? Dabi. Hesekia yɛ obi a ɔdɔ Yehowa paa, na na Yehowa nguan da ne koma so. Enti nea odii kan de sii n’ani so ne sɛ ɔbɛma nokware som afa ne ntama pa afura wɔ ɔman no mu na waboa ɔmanfo no ma wɔadan aba Yehowa nkyɛn. Bere a Hesekia huu nea Onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ no, wantena ne to so koraa. Ɛnyɛ biribi a ɛte saa na yɛpɛ sɛ yesuasua anaa?—2 Be. 29:1-19.
7. Adɛn nti na na ehia sɛ ɔhene foforo no bɔ Lewifo no kyidɔm?
7 Sɛ nokware som bɛkɔ nkan a, na Lewifo bedi mu akoten paa. Enti Hesekia hyiaa Lewifo no, na ɔbɔɔ wɔn anohoba sɛ ɔbɛbɔ wɔn kyidɔm ma wɔayɛ adwuma no. Ɔhene no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo na Yehowa apaw mo sɛ munnyina n’anim nsom no.” (2 Be. 29:11) Bere a Lewifo tee asɛm yi wɔ nhyiam no ase no, hwɛ sɛnea anigye bɛhyɛ wɔn koma mã ma ebia adan nisu mpo! Afei deɛ ɔhene no ama Lewifo no tumi sɛ wɔmma nokware som so wɔ ɔman no mu!
8. Dɛn bio na Hesekia yɛe de boaa nkurɔfo no ma wɔsan baa Yehowa nkyɛn? Dɛn na efii mu bae?
8 Hesekia frɛɛ Yuda ne Israel nyinaa hyiae ma wodii Twam afahyɛ kɛse bi. Ɛno akyi no, wɔde Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ no hyehyɛɛ so nnanson. Afahyɛ no yɛɛ wɔn dɛ araa ma wɔsan de nnanson kaa ho. Bible ka sɛ: “Ahurusidi kɛse baa Yerusalem; efi Dawid ba, Israel hene Solomon bere so, ebi mmaa Yerusalem saa da.” (2 Be. 30:25, 26) Yebetumi aka sɛ afahyɛ yi hyɛɛ wɔn nkuran maa obiara ho sɛpɛw no. Sɛ yɛhwɛ 2 Beresosɛm 31:1 a, yehu sɛ bere a wowiee afahyɛ no ara pɛ na “wokobubuu abosom adum twitwaa abosonnua, na wobubuu sorɔnsorɔmmea ne afɔremuka” nyinaa. Afei deɛ wuhu sɛ ɔman no aba Yehowa nkyɛn ampa. Eyi siesiee wɔn maa ɔhaw bi a na ɛrebobɔ ba.
ƆHENE NO DE NE HO TOO YEHOWA SO
9. (a) Ɛyɛɛ dɛn na pɔw a Israel bɔe no gye gui? (b) Nkonim bɛn na Senaherib dii wɔ Yuda so mfiase no?
9 Ampa ara Yesaia asɛm no baa mu; Asiria ko faa Israel ahemman no na wɔsoaa ɔmanfo no kɔe. Enti pɔw a Israel hene bɔe sɛ ɔde obi a ɔnyɛ Dawid aseni bɛtena Yuda ahengua so no gye gui. Ɛnde, dɛn bio na Asiriafo bɛyɛ? Wɔde wɔn ani sii Yuda so. Bible ka sɛ: “Ɔhene Hesekia afe a ɛto so dunan mu no, Asiria hene Senaherib baa Yuda nkurow a wɔabɔ ho ban no nyinaa so bɛfae.” Senaherib faa Yuda nkurow 46. Fa no sɛ na wote Yerusalem saa bere no. Wuhu sɛ Asiriafo no redwiriw nkurow gu mmiako mmiako. Afei deɛ ɛrekeka ba baabi a wote. Dɛn na wobɛyɛ?—2 Ahe. 18:13.
10. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ asɛm a ɛwɔ Mika 5:5, 6 hyɛɛ Hesekia nkuran?
10 Hesekia hui sɛ nea ɛreba no ani sõso, nanso ne koma antu. Wankɔdan abosonsom man biara sɛnea ne papa Ahas ɔwaefo no yɛe no. (2 Be. 28:20, 21) Hesekia de ne werɛ nyinaa hyɛɛ Yehowa mu. Ebia na onim asɛm a odiyifo Mika ka faa Asiriafo ho yi: “Sɛ Asiria ba yɛn asase so . . . a, yɛbɛma nguanhwɛfo baason, adesamma mu abirɛmpɔn baawɔtwe, ne no adi asi. Na wɔde nkrante bɛyɛn Asiria asase.” (Mika 5:5, 6) Asɛm yi kyerɛ sɛ Yehowa bɛma asraafo bi ne Asiriafo abɛko na wayɛ wɔn defedefe. Ɛbɛyɛ sɛ eyi hyɛɛ Hesekia den paa.
11. Bere bɛn na nkɔmhyɛ a ɛfa nguanhwɛfo baason ne abirɛmpɔn baawɔtwe ho no benya mmamu kɛse?
11 Ná nkɔmhyɛ a ɛfa nguanhwɛfo baason ne abirɛmpɔn baawɔtwe ho no benya mmamu kɛse wɔ Yesu awo akyi koraa. Yesu ne ‘Israel sodifo a n’ase fi tete.’ (Monkenkan Mika 5:1, 2.) Nkɔmhyɛ a ɛfa nguanhwɛfo ho yi bɛbam daakye, bere a atamfo anaa “Asiria” atow ahyɛ Yehowa asomfo so no. Saa bere no Yehowa bɛma ne Ba a seesei ɔredi hene no adi asraafo bi anim asɛe atamfo no. Ɛnde, asraafo bɛn na ɔde wɔn bedi dwuma? Adesua no rekɔ so no, yebehu. Nanso momma yenni kan nhwɛ nea Hesekia yɛe bere a Asiriafo baa wɔn so ne nea yebetumi asua afi mu.
HESEKIA YƐƐ N’ADE NYANSAM
12. Dɛn na Hesekia ne ne mpanyimfo yɛe de bɔɔ Onyankopɔn nkurɔfo ho ban?
12 Sɛ yehyia ɔhaw bi na ɛsõ sen yɛn a, Yehowa ayɛ krado sɛ obeso yɛn mu, nanso sɛ yebetumi ayɛ ho biribi a, Yehowa hwɛ kwan sɛ yebetu ho anammɔn. Bere a Asiriafo baa Yudafo so no, Hesekia ammobɔ ne nsa antena hɔ; ɔyɛɛ nea obetumi wɔ ho. Bible ka sɛ Hesekia ne “ne mpanyimfo ne ne mmarima ahoɔdenfo” faa adwene sɛ “wobesisiw nsuwansuwa a ɛwowɔ kurow no akyi no . . . Bio nso, onyaa akokoduru, na ɔtoo afasu a adwiriw agu no nyinaa, na osisii abantenten wɔ so; ɔsan too afasu foforo kurow no akyi, . . . afei ɔyeyɛɛ akode bebree ne akyɛm.” (2 Be. 32:3-5) Saa bere no Yehowa faa Hesekia ne ne mpanyimfo ne adiyifo anokwafo so bɔɔ ne nkurɔfo ho ban. Ná “mmarima ahoɔdenfo” yi ayɛ sɛ nguanhwɛfo a Yehowa de wɔn di ne man anim.
13. Bere a Asiriafo reba Yudafo so no, ade a ɛho hia paa bɛn na Hesekia yɛe de siesie nkurɔfo no? Asɛm a Hesekia kae no boaa nkurɔfo no sɛn?
13 Mfiase no, Hesekia ne ne mpanyimfo sisiw nsuwansuwa na wɔtoo afasu bɔɔ kurow no ho ban. Nanso akyiri yi ɔyɛɛ biribi a ɛsen eyi koraa. Ɔboaboaa ɔman no ano hyɛɛ wɔn den. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnsuro na mommmɔ hu, Asiria hene ne nnipadɔm a wɔka ne ho no nti, efisɛ wɔn a wɔka yɛn ho no dɔɔso sen wɔn a wɔka ne ho. Ɔno de, ɔhonam basa na ɛka ne ho, na yɛn de, Yehowa, yɛn Nyankopɔn na ɔka yɛn ho sɛ ɔbɛboa yɛn, na wako yɛn ko ama yɛn.” Hesekia kaee nkurɔfo no sɛ Yehowa bɛko ama wɔn, na eyi hyɛɛ wɔn den ma wɔde wɔn ho too Yehowa so. Yudafo no tee eyi no, wɔde “wɔn werɛ hyɛɛ Yuda hene Hesekia nsɛm no mu.” Hyɛ no nsow sɛ asɛm a Hesekia kae no na ɛkaa ɔman no koma too wɔn yam. Hesekia ne ne mpanyimfo ne mmarima ahoɔdenfo ne odiyifo Mika ne Yesaia kyerɛe sɛ wɔyɛ nguanhwɛfo ampa. Nokwasɛm ni, nea Yehowa nam odiyifo Mika so kae no, saa pɛpɛɛpɛ na mmarima yi yɛe.—2 Be. 32:7, 8; monkenkan Mika 5:5, 6.
Asɛm a Hesekia kae no maa nkurɔfo no koma tɔɔ wɔn yam (Hwɛ nkyekyɛm 12, 13)
14. Asɛm bɛn na Rabsake kae? Dɛn na Yudafo no yɛe wɔ ho?
14 Asiria hene ne n’asraafo bɔɔ dɔmpem wɔ Lakis wɔ Yerusalem anafo. Otuu abɔfo abiɛsa kɔɔ Yerusalem sɛ wɔnkɔka nkyerɛ nkurɔfo no sɛ wɔn ankasa mfa wɔn ho mmrɛ no bɔkɔɔ. Abɔfo no mu otitiriw ne Rabsake, na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛto Yudafo no brada. Ɔne wɔn kasaa Hebri mu. Nea edi kan, otutu guu nkurɔfo no asom sɛ mma wontie wɔn hene no, mmom wɔmfa wɔn ho mma Asiriafo no. Afei ɔdɛfɛdɛfɛɛ wɔn sɛ ɔde wɔn bɛkɔ asase papa bi so ma wɔanya ahotɔ. (Monkenkan 2 Ahene 18:31, 32.) Rabsake amma anso hɔ ara. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ amanaman no anyame biara nni hɔ a watumi agye ne nkurɔfo afi Asiria nsam, enti ɛnyɛ ade a Yehowa betumi agye Yudafo no afi Asiriafo nsam. Nanso Rabsake nnaadaa ne nkontomposɛm no guu wɔn aso akyi; wɔamfii no. Saa na ɛnnɛ Yehowa asomfo yɛ.—Monkenkan 2 Ahene 18:35, 36.
15. Dɛn na na ehia sɛ Yerusalemfo yɛ? Dɛn na Yehowa yɛ de gyee kurow no?
15 Asɛm no haw Hesekia paa, nanso wannan ankɔ ɔman biara nkyɛn ankɔpɛ mmoa. Mmom ɔtoo odiyifo Yesaia nkra sɛ ɔmmra. Yesaia ka kyerɛɛ Hesekia sɛ Senaherib ‘remma kurow no mu, na ɔrentow agyan mma hɔ.’ (2 Ahe. 19:32) Nea na ehia ara ne sɛ Yerusalemfo bɛma wɔn bo ayɛ duru na wɔatintim. Ná Yehowa aka sɛ ɔbɛko ama Yuda, na ampa-ne-ampa ara ɔko gyee wɔn! “Anadwo no ara Yehowa bɔfo fi kokunkum Asiriafo nsraban no mu nnipa mpem ɔha aduɔwɔtwe anum.” (2 Ahe. 19:35) Ɛnyɛ nsuwansuwa a Hesekia sisiw ano anaa afasu a ɔtoe na egyee Yudafo; mmom Yehowa ankasa nsa na egyee wɔn.
DƐN NA YESUA FI MU NNƐ?
16. Henanom na ɛnnɛ wogyina hɔ ma (a) Yerusalemfo (b) “Asiria” (d) nguanhwɛfo baason ne abirɛmpɔn baawɔtwe no?
16 Nkɔmhyɛ a ɛfa nguanhwɛfo baason ne abirɛmpɔn baawɔtwe ho no benya ne mmamu kɛse wɔ yɛn bere yi so. Tete no, Asiriafo kɔtow hyɛɛ Yerusalemfo so. Ɛnnɛ nso yɛwɔ “Asiria” bi wɔ hɔ, na ɛrenkyɛ wɔbɛtow ahyɛ Yehowa nkurɔfo so. Atamfo yi adwene nyinaa ne sɛ wɔbɛpra Yehowa nkoa afi asase so. Bible san ka sɛ “Gog a ofi Magog” bɛtow ahyɛ Yehowa asomfo so, na saa ara na “atifi fam hene” ne “anafo fam hene” ne “asase so ahene” nyinaa bɛtow ahyɛ wɔn so. (Hes. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Adi. 17:14; 19:19) Ɛsono atamfo yi mu biara anaa? Yɛrentumi nsi no pi. Ebia atamfo koro no ara na Bible ma wɔn din ahorow saa. Ɛnde, ‘asraafo’ bɛn na Mika nkɔmhyɛ no ma yehu sɛ Yehowa de bɛba ɔtamfo tirimɔdenfo, “Asiria” so? Biribi a yɛnhwɛ kwan koraa. Bible ka sɛ asraafo no ne “nguanhwɛfo baason, adesamma mu abirɛmpɔn baawɔtwe”! (Mika 5:5) Nguanhwɛfo ne abirɛmpɔn no gyina hɔ ma asafo mu mpanyimfo. (1 Pet. 5:2) Ɛnnɛ Yehowa ama yɛanya mpanyimfo pii a wɔhwɛ ne nguan na wɔhyɛ wɔn den. Ɔyɛ saa de siesie wɔn na sɛ daakye “Asiria” tow hyɛ wɔn so a, wɔatumi agyina pintinn. * Mika kae wɔ ne nkɔmhyɛ no mu sɛ nguanhwɛfo no de “nkrante bɛyɛn Asiria asase.” (Mika 5:6) ‘Akode a wɔde kɔ sa’ no biako ne “honhom no nkrante,” kyerɛ sɛ Onyankopɔn Asɛm.—2 Kor. 10:4; Efe. 6:17.
17. Nneɛma anan bɛn na mpanyimfo betumi asua afi nea yɛasusuw ho yi mu?
17 Asafo mu mpanyimfo betumi asua biribi afi nea yɛasusuw ho seesei ara no mu. Ebi ni: (1) Ade a ehia paa a mubetumi ayɛ de asiesie mo ho ama “Asiria” ne sɛ mo ankasa benya gyidi kɛse wɔ Onyankopɔn mu na moaboa mo nuanom ma wɔayɛ saa ara. (2) Sɛ “Asiria” tow hyɛ Onyankopɔn nkurɔfo so a, ɛsɛ sɛ mo a moyɛ asafo mu mpanyimfo no nya ahotoso paa sɛ Yehowa bɛko agye yɛn. (3) Saa bere no Yehowa ahyehyɛde no bɛma yɛn akwankyerɛ ahorow, na ebia nnipa ani so no ɛbɛyɛ te sɛ nea ntease nnim. Nanso ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa siesie yɛn adwene sɛ akwankyerɛ biara a yɛn nsa bɛka no yebetie. Sɛ yɛn ani gye akwankyerɛ no ho oo, sɛ yɛn ani nnye ho oo; yɛte ase oo, yɛnte ase oo, momma yennye ntom efisɛ ebegye yɛn nkwa. (4) Sɛ yɛn mu bi de ne werɛ ahyɛ wiase nhomasua anaa wiase ahonyade anaa nnipa ahyehyɛde bi mu a, ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ yedwen ho bio na yɛyɛ nsakrae. Ɛsɛ sɛ mpanyimfo ma wɔn ani da hɔ na wɔyɛ krado sɛ wɔbɛboa obiara a ne gyidi rehinhim.
18. Sɛ yɛma nea yɛasua yi nyinaa tena yɛn adwenem a, daakye ɛbɛboa yɛn sɛn?
18 Bere bi reba, na sɛ edu a ɛbɛyɛ te sɛ nea Onyankopɔn asomfo nni ahobammɔ biara, sɛnea Hesekia bere so no atamfo kaa Yudafo hyɛɛ Yerusalem no. Saa bere no, ɛsɛ sɛ yɛn mu biara de ne werɛ hyɛ Hesekia asɛm no mu. Momma yɛnkae sɛ, atamfo no deɛ “ɔhonam basa” na ɛka wɔn ho, na yɛn deɛ, “Yehowa, yɛn Nyankopɔn na ɔka yɛn ho sɛ ɔbɛboa yɛn, na wako yɛn ko ama yɛn”!—2 Be. 32:8.
^ nky. 4 Hebri asɛmfua a wɔkyerɛ ase “ababaa” wɔ Yesaia 7:14 no betumi akyerɛ ɔbea warefo anaa ɔbaabun. Enti yebetumi de Hebri asɛmfua no ara afrɛ Yesaia yere ne Yudani baabun Maria ma ayɛ yiye.
^ nky. 16 Wohwɛ Bible mu a, wɔtaa de akontaahyɛde ason gyina hɔ ma biribi a edi mũ. Akontaahyɛde awotwe betumi akyerɛ biribi a ɛdɔɔso.
Nguanhwɛfo Baason, Abirɛmpɔn Baawɔtwe—Dɛn na Ɛkyerɛ Nnɛ?